'ट्रंक लाइनको छलफलमा कुलमानजीले समितिको मर्यादा उल्लंघन गर्नुभयो' - UrjaKhabar
‘ट्रंक लाइनको छलफलमा कुलमानजीले समितिको मर्यादा उल्लंघन गर्नुभयो’
जेठ १३, २०७६ 2883 लेख
सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पूर्ण मन्त्रालयको बेरुजु हेर्छ । महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदन दिएपछि कुन कुन मन्त्रालयको बेरुजु छ भनेर हेरिन्छ । यसबारे विभिन्न उजुरी पर्छन् । सभापति र सचिवले संवेदनशील विषयमा बैठक राख्नुहुन्छ । यसैक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विषय आएको छ ।
आएका विषयमा को कसरी बोल्यो । मर्यादित वा अमर्यादित को भयो ? रेकर्ड नै छ । प्रश्न प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँबराबरको बेरुजुको हो । जुन डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुलमानजीले उज्यालो दिनुभयो । यो सकारात्मक कुरा हो । कुनै व्यक्तिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन सक्छन् । नेपाली संस्कृतिमा केही राम्रो गर्नेबित्तिकै देवत्वकरण गर्ने र नराम्रो हुनासाथ रक्षसीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ । यो ठीक होइन ।
लेखा समिति सार्वभौम हो । त्यहाँ जनताबाट चुनिएर आएका सांंसद हुन्छन् । त्यहाँ आएका विषयमा सांंसदलाई शंका लाग्यो भने प्रश्न गर्न पाउँछ । जवाफ दिने व्यक्तिलेे कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने हो । साेेेधेेका विषयमा मर्यादित भएर जवाफ दिनुपर्छ भन्नेे हाे । मर्यादित भएरै दिन सक्छ । दिनुपर्छ । यहाँनिर मर्यादा उल्लंघन भयो कि ब
लेखा समिति सार्वभौम हो । त्यहाँ जनताबाट चुनिएर आएका सांंसद हुन्छन् । त्यहाँ आएका विषयमा सांंसदलाई शंका लाग्यो भने प्रश्न गर्न पाउँछ । जवाफ दिने व्यक्तिलेे कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने हो । साेेेधेेका विषयमा मर्यादित भएर जवाफ दिनुपर्छ भन्नेे हाे । मर्यादित भएरै दिन सक्छ । दिनुपर्छ । यहाँनिर मर्यादा उल्लंघन भयो कि भन्ने मैले बुझ्छु ।
यसो हेर्दा कुलमानजीले उज्यालो दिनुभयो ।उहाँ एक जना व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन । त्यहाँ प्राधिकरणको टिम थियो । त्यसको साथमा सरकार थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । नेतृत्व उहाँले दिनुभयो । यसका लागि उहाँ सह्रानीय नै हो । हामीले राम्रै भनेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पर्छु भन्नुभएको छ । यो लक्ष्य हो । लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । यहाँ कुलमानको मात्र प्रश्न होइन । मेरो पनि प्रश्न हो । मैले सैद्धान्तिक कुरा गरेको छु ।
प्राधिकरणमा बेरुजु आइसकेपछि किन आयो त ? किन असुल हुन सकेन ? त्यो सरकारको पैसा हो । त्यहाँ कुलमानजीलाई मात्र होइन । मन्त्रालयका सचिवलाई समेत सोधिएको छ । सम्बन्धित सबै कर्मचारीलाई प्रश्न गरिएको छ । यहाँ कुलमानको मात्र प्रश्न होइन भन्ने लाग्छ मलाई ।
पाटन उच्च अदालतले सरकारको पैसा हो उठाउ भनेर आदेश दिइसक्दा पनि फेरि अर्को छानबिन समिति बनाउनुपार्ने औचित्य हो कि होइन ? समितिमा विषय आएपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्छन् । प्रश्न उठाउनासाथ कुनै व्यक्तिको मान मर्यादा भयो वा हुर्मत लिइयो भन्ने हो भने त समितिको आवश्यकतै छैन भन्नुपर्यो ।
बेरुजु किन उठेन भन्ने विषयमा सभापतिसँग हुन्छ । उपसमिति बनाएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । विषय आएपछि अहिलेकै कार्यकारीलाई बोलाउने हो विगतका कर्मचारी छानबिनका क्रममा तनिँदै जान्छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत दिनु नै गल्ती भयो कि भन्ने प्रश्न छ । यसो हो भने किन समीक्षा गरिएन ? सर्वसाधारणले ३ महिनासम्म पैसा नतिरे लाइन काटिन्छ तर यहाँ उद्योगको ३ वर्षसम्म काटिएको छैन । न महसुस उठाइएको छ ।
संसदभन्दा माथि कोही पनि छैन । समितिले सबै कागजात मगाएर पुन: छानबिन गर्छ । र, सरकारलाई उचित निर्देशन दिन्छ ।
समाचार दैनिक डटकमको सहयोगमा ।